Yugyan Daily » भाइ पर्नेबाट बाटो ढुकेर भागरथीको हत्या
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार || 18 Feb 2021, Thursday
पुरानो रिसइबीका कारण हत्या
भाइ पर्नेबाट बाटो ढुकेर भागरथीको हत्या
अनुसन्धान टुंगोमा पुग्नुमा आन्दोलनरत पक्ष, गाउँपालिका, स्थानीय भद्रभलादमी, पूर्वप्रहरी र बैतडीकै बहालवाला प्रहरीले सहयोग गर्नुभयो :डीआईजी उत्तमराज सुवेदी
फागुन ६ गते २०७७/साभार अन्नपुर्णपोष्ट
भागरथी भट्टको हत्या आरोपमा प्रहरीले उनकै भाइ नाता पर्ने १६ वर्षे दिनेश भट्टलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदीले १४ दिनको अनुसन्धानपछि दिनेशले साविती बयान दिएको जानकारी दिए।
‘साविती बयान नै मुख्य प्रमाण हो’, डीआईजी सुवेदीले भने, ‘अझ त्यसमा तीन जना प्रत्यक्षदर्शी, प्राविधिक टोलीको अनुसन्धान र आरोपीको शरीरमा देखिएको सामान्य चोटपटकजस्ता प्रमाणका आधारमा हामी अभियुक्तको नजिक पुगेका हौं।’
दिनेश प्रहरीलाई प्रारम्भिक बयान दिएर घर फर्किएका थिए। प्रहरीले शनिबारदेखि मंगलबारसम्म चार दिन लगातार गहिरो अनुसन्धानको घेरामा राखेको थियो। शनिबारदेखि उनलाई बिहान प्रहरी चौकी खोचलेकमा बोलाउने र बेलुकी घर पठाउने गर्दै लगातार सोधपुछ गर्दै आएको थियो।
‘उनले मंगलबार साविती बयान दिएका हुन्’, डीआईजी सुवेदीले भने, ‘उनी विद्यालयबाट आएर खोचलेक भन्ने बजारबाट भागरथीको पछि–पछि घरतिर गएका छन्। सिल्ल भन्ने स्थानमा उनी भागरथीलाई उछिनेर अगाडि गएका छन्। घटनास्थलमा पुगेर उनले भागरथीलाई कुरेका छन्। त्यसपछि घटनास्थलमा पुग्नेबित्तिकै धकेलेर खोल्सोमा फालेका छन्। त्यहाँ उनले घाइते अवस्थामा रहेकी भागरथीको घाँटी थिचेर हत्या गरेका छन्।’
तर, दिनेशले हत्यामा संलग्नता स्वीकार गरे पनि बलात्कार भने स्वीकार गरेका छैनन्। ‘उनले भागरथीको हत्या गरी तल्लो वस्त्र खोलेको तर बलात्कार नगरेको बयानमा भनेका छन्’, सुवेदीले भने, ‘त्यसको पनि सरकारी वकिलका सामुन्ने गहिरो अनुसन्धान गर्ने क्रम जारी छ।’
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीका भागरथी र दिनेश दुवै जनाले स्थानीय भूमिराज विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरेका थिए। त्यसपछि भागरथी वडा नम्बर ३ स्थित सनातन धर्म माविमा कक्षा १२ र दिनेश कक्षा ११ मा पढ्थे। दिनेशलाई सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डीआईजी सुवेदीसहित संघीय प्रहरी कार्यालय धनगढीका एसएसपी जनकराज पाण्डे, जिल्ला प्रहरी बैतडीका डीएसपी नारायण अधिकारी र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डीएसपी पञ्चकुमार बाँकु उपस्थित थिए।
भागरथीका दाइ केशव भट्टले दिनेशविरुद्ध जाहेरी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले पीडित परिवारका तर्फबाट जाहेरी परेको जानकारी दिएको छ।
अभियुक्तप्रति चार आशंका
पहिलो : दिनेश टिफिन टाइममा भलिबल खेलेर पाँचौं घण्टी लाग्नेबित्तिकै सनातन धर्म माविबाट घर आए। तर, उनले प्रहरी र आफन्तलाई आफू एक पिरियड छाडेर मात्रै घर आएको बताए। प्रहरी भन्छ, ‘उनले घटनापछि घर पुगेको समय लगभग पूरै पढेर आएको भन्दा झन्डै–झन्डै एक पिरियड अगाडि हुन्छ। समय मिलाउन झुटो बोलेको।’
दोस्रो : १:४५ मा टिफिन टाइम सकिन्छ। १:५० मा दिनेश, भागरथी, भानदेव र लीलाधर खोचलेकमा भेटिन्छन्। भागरथी घर हिँडिहाल्छिन्। लीलाधर र भानदेव कपाल काट्न सैलुनमा छिर्छन्। तर, प्रहरी भन्छ, ‘दिनेश कता गए रु बताउँदैन।’
तेस्रो : खोचलेकबाट झन्डै १स्५५ तिर दिनेश भागरथीको पछि–पछि घर जान्छन्। त्यहाँबाट घटनास्थलको दूरी पैदल ४० मिनेट हाराहारी हो। उनले २स्३५ बजेसम्म लवलेक बन पार गरिसक्नुपर्छ। तर, उनलाई ३स्२५ बजे पासिमबाटाका मानिस घर जाँदै गरेको देख्छन्। प्रहरी भन्छ, ‘त्यो बीचको ५० मिनेटको समयमा दिनेश कहाँ गए ?’
यस्तै कारणले उनीमाथि निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। दिनेशले आफूलाई खोचलेकमा देख्ने मानिससँग झगडा गरेकाले पनि उनी झन् शंकाको घेरामा परेको प्रहरीले बतायो।
यस्तो छ साविती बयान
भागरथीले भानदेवलाई कति बेला जाने भनेर सोधिन्। भानदेवले कपाल काटेर जाने भनेपछि भागरथी घरतिर हिँडिन्। लीलाधर र भानदेव सैलुनमा छिरे भने दिनेश भागरथी हिँडेको ४–५ मिनेटपछि घरतिर हिँडे। उनले भागरथीलाई खोचलेकबाट १५ मिनेट पैदल दूरीमा रहेको सिल्ल भन्ने गाउँमा ओभरट्याक गरे।
दिनेश भागरथीलाई छाडेर सिधै अगाडि जाँदै गरे। उनी घटनास्थल भएको ठाउँमा भागरथीभन्दा केही मिनेटअघि पुगेका थिए। भागरथी मोबाइलमा एयरफोन लगाएर गीत सुन्दै घरतिर आइरहेकी थिइन्। घटनास्थलमा दुवै जनाको भेट भयो। मुस्कुराउँदै आफूनजिक आएकी भागरथीलाई दिनेशले धक्का लगाएर खोल्सोमा फाले।
त्यो खोल्सो लवलेक जंगलको ५० प्रतिशत वन क्षेत्र कटिसकेपछि छ। खोल्सोभन्दा चार–पाँच सय मिटरमा पासिमबाटा भन्ने गाउँ छ। भागरथी खोल्सोमा धकेलिएपछि घाइते भइन्। घाइते अवस्थामा फेरि दिनेशले अलि तल फाले। त्यति बेला भागरथी प्रतिकार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन्।
तेरा बाले मेरो फुपूको बलात्कार गर्ने ? भनेर उनले भागरथीको घाँटी थिचे र मारिदिए। त्यसपछि भागरथीको तल्लो वस्त्र मात्रै खोले उनले। भागरथीको फोन खोल्सोको बीचमै खसेको थियो। दिनेश उनको फोन लैजान फेरि शव भेटिएको स्थानभन्दा अलि माथि आए। उनले फोनको ब्याट्री झिके र केही पर गएर फालिदिए। जुन स्थान प्रहरीको तालिमप्राप्त कुकुरले पछ्याएको थियो।
जिल्लाबाट काठमाडौंसम्मको टोली अनुसन्धानमा
माघ २१ गते भएको भागरथीको हत्या घटना निर्मला पन्त प्रकरणसँग तुलना गरेर चर्चामा आउन थाल्यो। शव भेटिएकै भोलिपल्ट माघ २३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले एसएसपी जनकराज पाण्डेलाई घटनास्थल पठायो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अपराध विज्ञ पञ्चकुमार बाँकु पनि प्राविधिक टोलीसहित प्रहरी चौकी खोचलेक पुगे।
अनुसन्धान अघि बढ्दै गर्दा विरोध प्रदर्शन हुन थालेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी सुवेदी माघ २५ गते खोचलेक पुगे। खोचलेक प्रहरी चौकीलाई केन्द्र बनाएर डीआईजी सुवेदीको नेतृत्वमा अनुसन्धान अगाडि बढ्यो।
‘काठमाडौंबाट र प्रदेशभरिका एक सय हाराहारी अपराध अनुसन्धान विज्ञ विभिन्न दर्जाका प्रहरी अधिकृत अनुसन्धानमा सक्रिय थिए’, सुवेदीले भने।
खोचलेकबाट चार प्रकारका टोली गाउँ–गाउँ खटिए। पहिलो टोली क्षेत्रीय अनुसन्धान टोली ९आरआईटी० पनि खटियो। डीआईजीले गठन गरेको टिम हो यो। प्रदेशभरिको अपराधमा यो टिमले काम गर्छ। चोरी तस्कर र प्रदेशभरिका जुनसुकै अपराध अनुसन्धानमा पनि यही टोली खटिन्छ। यस टोलीका सबै जना खोचलेक केन्द्रित भएर अनुसन्धानमा खटिए।
अर्को टोली ब्युरोका डीएसपी पञ्चकुमार बाँकु नेतृत्वको थियो। यो टोलीले गाउँ–गाउँबाट आएको सूचना र प्रविधिको विश्लेषण गर्दै आएको थियो। शंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने, शंकास्पद व्यक्तिको घटनास्थल आसपासको लोकेसन हेर्ने, फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालको विश्लेषणमा पनि ब्युरोको टोली थियो।
तेस्रो टोली जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीको थियो। उसले गाउँमा यसअघि जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिको तथ्यांक निकालेको थियो। गाउँमा यसअघि संदिग्ध गतिविधि गर्नेहरूको तथ्यांक तयार पार्ने थियो। उसले मादक पदार्थ सेवन गरेर शान्ति–सुरक्षा भंग गरेका, प्रहरी चौकीमा अपराधजन्य कार्यमा संलग्न भएकाहरूको तथ्यांक पनि यस टोलीको जिम्मामा थियो।
चौथो टिम डीआईजी सुवेदी र एसएसपी पाण्डेको थियो। यो टिमले बाहिरबाट आएका सूचना हेर्ने, भेरिफाई, विश्लेषण गर्ने र अर्को दिनको योजना तयार पाथ्र्यो। ‘भागरथी घटनामा हामीले शव फेला परेदेखि रुटिनमा काम गर्‍यौं। टिमहरू मोबलाइजेसन गर्‍यौं। अनि मात्रै निष्कर्षमा पुग्यौं’, सुवेदीले भने।
यसरी सफल भयो अनुसन्धान
हामीले विभिन्न शंकाले हेर्‍यौं। कतै सँगै पढ्ने साथीबाटै त यो घटना भएन भन्ने लाग्यो। अनुसन्धान त्यतातिर मोड्यौं। भागरथी कति बजे स्कुलबाट बाहिरिइन् ? उनीसँग कोको थिए ? यस्ता सूचना बटुल्दै जाँदा दिनेश भट्ट (आरोपी)को व्यवहार शंकास्पद देखियो। भागरथीको पछि–पछि दिनेश नै लागेको केही विद्यार्थीबाट थाहा भयो। यो रहस्य भागरथीको शव फेला परेको तेस्रो दिनदेखि खुल्यो।
दिनेशलाई सोधपुछ गर्दा करिब ३५ मिनेट उनी कहाँ गए भन्ने विषय रहस्यमय बन्यो। उनलाई लवलेक जंगलकै आसपास देख्ने व्यक्तिसँग प्रहरीले सनाखत (पुष्टि) गरेपछि हाम्रो अनुसन्धान दिनेशसँग नै बढी केन्द्रित भयो। भागरथी माघ २१ गते करिब २ बजे खोचलेक बजारमा देखिएकी थिइन्। दिनेश पौने १ बजे पढाइ पूरा नगरी निस्किसकेका थिए। बीचमा देख्नेले पनि भागरथीको पछिपछि लागेर दिनेश हिँडेको बताएका थिए।
हामीले अनुसन्धानमा दुई सयभन्दा बढीलाई सोधपुछ गर्‍यौं। २२ जनालाई त शंकाकै घेरामा राखेर केरकार गर्‍यौं। तर, दिनेशको व्यवहार, बयान र अन्य प्रामाणिक वस्तुले उनी मुख्य आरोपी हुन् भन्नेमा कुनै दुविधा रहेन।
अनुसन्धानका विभिन्न विधि हुन्छन्। जुन दिन म आफैं कुकुर लिएर घटनास्थल पुगें, त्यही दिन दिनेश घटनास्थलमा पुगेनन्। हामीलाई शंका त्यहीँ लाग्यो। घरमा पनि दिनेशले डराएजस्तो व्यवहार गर्ने र छट्पटाउने गरेको पाइयो। फागुन ३ गते दिनेशलाई सम्झाइबुझाइ केरकार गर्दा बल्ल घटना स्विकारे। उनले पुरानो रिसइबीका कारण हत्या गरेको बताए। अन्य प्रमाणले पनि दिनेश नै आरोपी हो भन्ने संकेत गरेपछि हामी निक्र्योलमा पुग्यौं। यो घटनामा दिनेश नै संलग्न हो भन्ने पुष्टि भयो।
पोस्टमार्टम रिपोर्टले भागरथीको घाँटी थिचेर हत्या भएको र यौनसम्पर्कसमेत भएको देखाएको थियो। हामीले प्रहरीकै विधिविज्ञान प्रयोगशालामा शव, कपडा र शरीरका विभिन्न भागमा लागेका चोटको नमुना पठाएका छौं। त्यसको रिपोर्ट आएपछि थप प्रमाण बलियो हुन्छ।
भागरथीको बलात्कारपछि हत्याका आरोपी पत्ता लाग्नुमा मलाई मात्रै जस जाँदैन। अनवरत रूपमा १३ दिनसम्म खटिएर प्रमाण संकलनमा लागेका सबैलाई उत्तिकै जस जान्छ। समग्रमा नेपाल प्रहरीलाई नै जस जान्छ।
(सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदीसँग अन्नपूर्णकर्मी सुवास गोतामेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
देशभर आजदेखि तीन दिनसम्म विविध कार्यक्रम आयोजना गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाइने
आजदेखि तीन दिनसम्म दीपावली गर्न आह्वान
इतिहासमै शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारको तीन बर्ष
ओलीले विकासको नेतृत्व लिनुभयो
माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने ‘श्रीपञ्चमी’ पर्व आज विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको निष्ठापूर्वक पूजा–आराधना गरी मनाइँदै
ज्ञान, सिद्धि र सद्बुद्धि प्राप्त हुने उल्लेख
सरकारले ल्याएको “नागरिक एप”मा गृह मन्त्रालयसँग रहेका २ करोड १५ लाख नागरिकताको विवरण
‘नागरिक एप’ सुरु
पानी मुनी गएपनि भागरथी र निर्मलाको अपराधीलाई छोडिन्‍न : प्रधानमन्‍त्री ओली
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत